Beledweyne : Ganacsiga oo maalintii labaad xiran iyo dibadbaxyo rabashado wata oo dhacay - Wargane News
Home Somali News Beledweyne : Ganacsiga oo maalintii labaad xiran iyo dibadbaxyo rabashado wata oo...
Waxaa maalintii labaad magaalada Beledweyne ka taagan jahwareerkii ganacsi ee ugu xumaa kaddib markii ay ganacsatadu gabi ahaanba diideen in ay wax ku iibsadaan lacagta shiling Soomaaliga.
Dibadbax rabashado wata oo ay dhigayeen dad intooda badan ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ayaa maanta ka dhacay magaalada, kuwaa oo ka cabanaya go’aanka ay qaateen ganacsatada madaama lacagta kaliya oo ay heli karaan qoysaskan tahay tan shiling Soomaaliga ee la diiday in wax lagu iibsado.
Dadkan ayaa la arkayay iyaga oo dhagaxyo ku tuuraya goobaha ganacsiga ee xiran, iyaga oo dhinaca kalana dalbanayay in gabi ahaanba la joojiyo adeegsiga EVC Plus-ka oo ah Aalad lacagaha leysugu gudbiyo.
Al-Shabaab ayaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan ka mamnuucay lacagta shiling Soomaaliga, taas oo sabab u ah in ganacsiga Beledweyne hakad gallo.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa maalintii shalay ku amray ganacsatada in ay furaan goobahooda ganacsiga, islamarkaana qaataan lacagta shiling Soomaaliga ah, hasse ahaatee amarka ka soo baxay maamulka ma noqon mid dhaqan-gala oo wali waxaa jirta cakirnaan dhinaca ganacsiga oo aan la ogeyn waqtiga ay soo dhamaan doonto.
Go’aanka ay qaateen ganacsatada ayaa saameynteeda ugu badan waxaa ay ku dhici doontaa qoysaska danyarta ah waxaana arinta la yaabka leh tahay in adiga oo heysta lacag haddana aadan waxba iibsan karin.